Afhayeenka ciidamada AMISOM oo qiray in askar looga laayey Muqdisho
Nairobi:-Afhayeenka ciidamada AMISOM Col. Paddy Ankunda ayaa waxaa uu saaka ku qabtay shirjaraa,id magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana uu ka hadlay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Degmada Deyniile isaga oo qiray in askar looga laayey dagaalka qaarna lagu la yahay nolosha.
Col. Paddy Ankunda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ugu dhinteen ciidamada AMISOM 10 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, labo kalana nolosha lagu la’yahay, waxaa kale oo uu sheegay in hal taangi laga gubay AMISOM.
Afayeenka ciidamada AMISOM Col. Paddy Ankunda ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka guulo ka gaareen ayna ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen inta badan Degmada Deyniile ayna dileen dagaalyahano tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab.
Dhanka kale Afhayeenka Al-Shabaab Sh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa shalay warbaahinta u soo bandhigay 76 askari oo ay ka dileen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi kuwaas oo dagaalkii ka dhacay Degmada dayniile si xun loogu jabiyey .
Wariyaha Halgan.net ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada Burundi ay ku hoobteen miinooyin dhulka loogu aasay iyo dhabar jabin lagu sameeyey ciidamadooda qaarna ayba lumeen .